Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! समयमै पहिचान भए ९५ प्रतिशत मुटुरोगको उपचार नेपालमा सम्भव : वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भट्टराई [अन्तर्वार्ता]
समयमै पहिचान भए ९५ प्रतिशत मुटुरोगको उपचार नेपालमा सम्भव : वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भट्टराई [अन्तर्वार्ता]
अन्जु डिम्दोङ तामाङ बुधबार, असोज १३, २०७८
आज विश्व मुटु दिवस । सेप्टेम्बर २९ का दिनमा प्रत्येक वर्ष विश्व मुटु दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि बर्सेनी मुटुरोगीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । नेपाल ह्दयरोग निवारण प्रतिष्ठानले नेपालको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत अर्थात् करिब ७५ लाख जनता मुटु रोगी भएको अनुमान गरेको छ । यस्तै करिब ३० प्रतिशत वयस्क नागरिकलाई उच्च रक्तचाप, २० प्रतिशतलाई कोलेस्टेरोल, १० प्रतिशतलाई मधुमेह भएको पनि अनुमान गरिएको छ ।
मुटु दिवसको सन्दर्भमा विगत १५ वर्षदेखि विशेषगरी मुटुसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आइरहनु भएका मनमोहन कार्डियोथोरासिस भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर महाराजगन्जमा कार्यरत वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. अनिल भट्टराईसँग ग्लोबल मिडियाका लागि अञ्जु तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
आज विश्व मुटु दिवस, वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञको दृष्टिले दिवसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
विश्व मुटु रोग दिवसको उद्देश्य भनेको नागरिकलाई मुटुको महत्व र कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने विषयमा नै जानकारी दिने हो । यो क्रम प्रत्येक वर्ष चल्दै आइरहेको पनि छ । र, आज पनि जारी छ । उपचारबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने नै विश्व मुटु दिवसको उद्देश्य हो ।
दिवसको उद्देश्यअनुसार राज्य र नागरिकस्तरबाट काम भएको पाउनु हुन्छ ?
पछिल्लो समय आमसञ्‍चारको विकासले पनि नागरिकलाई केही हदसम्म मुटु, यसको महत्व र यसबाट लाग्ने रोगहरुबाट बच्ने उपायबारेमा चेतनामूलक सन्देश प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ । तर तपाईं/हामीले सोचे जस्तो अझै पनि भएको छैन । सरकारको तर्फबाट पनि मुटुरोगको बारेमा जनचेतना फैलाउने कामलाई महत्व दिनु पर्नेमा अलि कम भएको छ ।
नेपालमा मुटुरोगीको संख्या बढ्दै गईरहेको भन्ने चिकित्सकहरुकै भनाइ सुनिन्छ, तपाईंको अनुभवले के बताउँछ ?
रोगीको संख्या बढ्नुमा पनि दुई कुरा छन् । एउटा त, नागरिकको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, अर्को सेवा विस्तार । पहिलाभन्दा अहिले सहजै रुपमा नागरिकले उपचार पाइरहनु भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विस्तार भएपछि परीक्षण गराउनेको संख्या बढ्नाले मुटुरोगीको संख्या बढेको देखिएको हो । तर बढेको हो कि होइन भन्ने विषयमा भने १०० प्रतिशत स्क्रिनिङ गरेर हेर्दामात्रै थाहा पाउन सकिन्छ ।
समग्रमा अस्पताल आउनेहरुको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्ला समय मुटुरोगीको संख्या बढेको देखिन्छ । मुटुरोगीको कूल तथ्याङ्कमध्ये विशेषगरी कोरोनरी आर्टरी डिजिज अर्थात् कालान्तरमा हृदयघात (हार्ट अट्याक) गराउने रोग पाँच वर्षमा ४ देखि ५ गुणा बढी नै देखिएको छ । यस्तै मुटुरोगीमध्ये पनि ४० प्रतिशतमा स्केमिक हार्ट डिजिज कालान्तरमा हार्ट अट्याक गराउन सक्ने रोग बढ्दै गएको देखिन्छ ।
मुटुलाई स्वस्थ राख्न अपनाउनुपर्ने उपाय केके हुन् ?
मुटुलाई स्वस्थ राख्नका लागि हाम्रो आहारविहार, दैनिक, व्यायमलगायतका कुराको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । धुम्रपान, मद्यपान नगर्ने, विशेषगरी हाइरिक्स अर्थात् तपाईंको परिवारमा कसैलाई मुटुसम्बन्धी रोग छ भने वंशाणुगत हुने सम्भावना भएकोले यस्तो परिवारका व्यक्तिले नियमित मुटुको परीक्षण गराउदा राम्रो हुन्छ । सँगै खानापानमा नून, चिनी ,चिल्लोको मात्रा कम खाने, रातो मासु पनि कम सेवन गर्ने र नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने हो भने स्वस्थ मुटु र स्वस्थ जीवनयापन गर्न सकिन्छ ।
सहरी क्षेत्रको खानापान हेर्ने हो भने मुटुलगायत रोग पनि बढ्दै गइरहेका छन्, विस्तारै खानपानमा झन् परिवर्तन भइरहेको छ भने मुटुरोगी त बढ्ने नै भए यस्ता कुरालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
मुटुरोगीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सहरीकरण हुँदै जाने क्रममा खानापानमा पनि निकै परिवर्तन भएको पाइन्छ भने अस्वस्थकर खानपान बढेको देखिन्छ । यस्तो समयमा नागरिकलाई रोग लाग्न अथवा मुटुरोग लाग्नबाट बचाउन चुनौती पनि उत्तिनै छ । मुटुरोग लाग्नबाट नागरिकलाई जोगाउन जनचेतना नै जरुरी छ ।
उपचार र निदानको मात्रै कुरा गर्नेभन्दा पनि जनचेतनामार्फत नागरिकलाई सचेत पारेर रोगै लाग्न नदिनु धेरै राम्रो उपाय हो । सहरी क्षेत्रमा त झन् धेरै मुटुरोगीहरु बढ्दै गइरहेका छन् । त्यसमा पनि युवा अवस्थाका नागरिकहरु, काठमाडौं, धरान, पोखरा जहाँ धेरै जनसंख्या बसोबास रहेको छ । यी व्यस्त सहरका नागरिकले मुटुलाई स्वस्थ राख्न केके गर्नपर्ला ?
मुटुलाई स्वस्थ राख्नको लागि युवावस्थाका नागरिकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको प्याकेटको खानेकुरा (जंग फुड), नून, चिनी, चिल्लोको मात्रा धेरै, कार्बोहाईटेड भएको खानेकुरा कम खाने बानी बसाल्नु पर्छ । साथै रातो मासुको सेवन कम गर्ने र धम्रपान–मद्यपानलाई कम गर्ने र वायू प्रदुषण पनि रोग बढ्ने भएको हुँदा यसबाट बच्नको लागि उपाय अपनाउँन सकेको खण्डमा केही हदसम्म भए पनि मुटुमा लाग्ने रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
सहरी क्षेत्रका नागरिकमा हिँडडुल कम छ । धेरै सवारी साधान प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएकोले यस्ता व्यक्तिले दिनमा सकिन्छ भने एक घण्टा सकिन्न भने आधा अर्थात ३० मिनेट पसिना आउनेगरी, श्वाँ–श्वाँ हुने गरी र मुटुको धड्कन ढुकढुक हुनेगरी नियमित व्यायाम गर्ने बानी बसालेमा मुटु रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ । नियमित रुपमा प्रेसर, सुगरलाई, कोलेस्टेरोल कन्ट्रोल गर्न सकेको खण्डमा हृदयघात हुनबाट बच्न सकिन्छ ।
(2) ‘हार्ट अट्याक’ गराउने रोग ५ गुणाले बढेको छ || Dr. Anil Bhattarai - YouTube
बुधबार, कात्तिक २४, २०७८ जनगणनाबारे बुझ्नुपर्ने कुराहरू